IWholesale Solutions - iONRUN Electric appliance (Huzhou) Co., Ltd.
Sinikezela ngezisombululo zokwenziwa kwe-OEM ezithembekileyo zokubonisa iimveliso ezipholileyo, ezinganeli nje ukwanelisa iimfuno ezithile zabathengi kodwa zikwabanceda banyuse ixabiso elongezelelweyo kwaye bakhulise ishishini elinempumelelo.
UKUZENZA NGOKWENZAKALELAYO KUNYE NOBHANDU
Ukongeza kuluhlu lwethu olubanzi lweemodeli eziqhelekileyo zeemveliso zesikhenkcezisi zorhwebo, sikwanalo namava abanzi ekwenzeni ngokwezifiso kunye nokubeka uphawu lweefriji ezimangalisayo nezisebenzayo kunye neefriji.
Sinamava atyebileyo ekuthumeleni iimveliso zefriji yokuthengisa kubathengi bethu kwihlabathi liphela.Siyayazi kakuhle indlela yokupakisha iimveliso ngokhuseleko kunye nexabiso eliphantsi, kunye nokulayisha ngokupheleleyo izikhongozeli.
IWARANTI & NENKONZO
Abathengi bethu bahlala besithemba kwaye besithemba, njengoko besihlala sigxininisa ekunikezeni iimveliso zefriji esemgangathweni kunye nomgaqo-nkqubo opheleleyo wewaranti esemgangathweni kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Ngamava ethu abanzi kwishishini lefriji, kukho eminye yemibuzo esoloko ibuzwa njengezisombululo zeengcaphephe zokusombulula iingxaki zesikhenkcisi somthengi wethu.
Olunye ulwazi lokhuphelo, kubandakanywa ikhathalogu yamva nje, incwadi yemiyalelo njl.